Atirishada Preity Zinta Xidigaha Ay Taageraha U Tahay Iyo Filmka Ay Xiiseyso Wax Ka Ogow (Codsi Akhriste) – Filimside.net
Atirishada Preity Zinta Xidigaha Ay Taageraha U Tahay Iyo Filmka Ay Xiiseyso Wax Ka Ogow (Codsi Akhriste)
Preity Zinta waa mid kamid ah atirishooyinka ugu qaab jiliinka wanaagsan ee Bollywoodka taariikh ahaan soo mareen waana atirisho daafah caalamk si weyn looga jecelyahay aflamatedna ilaa maanta la xiiseyo.
Xidigtaan aflaam lagu xasuusan doono aye sameysay sida Kya Kehna, Dil Hai Tumhara, Veer Zaara, Soldier, Kal Ho Na Ho iyo kuwa kale oo qaarkood lagu siiyay abaal marino waaweyn qaab jiliinkeda wacan aawgiis.
Hadaba waxaan idiin heynaa Preity xidigaha ay Bollywoodka ka taagerto iyo aflaamta ay ugu jeceshahay Bollywoodka xidigtaan qosolka ku qurxoon in badana dadka ogen.
Preity waxay Bollywoodka taagero rasmi ah oga tahay xidigaha kala ah Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Sanjay Dutt iyo atoorihi bari samaadki Guru Dutt waligeed ayeena xidigahan jecleed oo ay taageero buuxdo u ahed.
Marka dhanka atirishooyinka ayagana la hadlo waxay ka taagerta xidigaha kala ah Nargis, Madhuri Dixit, Kajol, Hema Malini iyo Sridevi xitaa qaarkood wey iska dhigi jirtay ama qaab jiliinkoda ayee iska doon dooni jirtay markee film sameyneyso.
Ugu dambeyn Preity filmka ay Bollywoodka ugu jeceshahay waa filmkeda ay atirishada ugu wanaagsan ee Filmfare award ku qaadatay kaaso ah kal Ho Na Ho waana filmka ay ugu jeceshahay Bollywoodka xidigtaan.